December 19, 2016 अम्बिका अन्तरबार्ता, ग्यालरी
१३ वर्षको उमेरमा तत्कालीन राज्य व्यवस्था ठीक भएन, त्यसलाई फेरेर नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको एउटा ठिटो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन ०६४ मा निर्वाचित भई तत्कालीन राज्यसत्ताको मूल केन्द्र ठानिएको काठमाडौं आयो । काठमाडौं आउँदासम्म ३१ वर्ष उमेर पार गरेको ठिटोलाई लागेको थियो, यो देशमा सबैभन्दा शक्तिसम्पन्न भनेका राजनीतिज्ञ नै हुन् र मन्त्री, प्रधानमन्त्री त झनै शक्तिशाली ।
तर संविधानसभाको प्रवेश र सँगसँगै राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा छिरेपछि अर्को कुरा थाहा पाए– यहाँका सिंह भनेका त कर्मचारी हुन् । कर्मचारीतन्त्र नै वास्तविक शक्तिसम्पन्न हुन् अथवा अन्य कुनै अरु अवयवहरुले पनि यहाँ काम गरिरहेको छ भन्ने जान्न, बुझ्न र शक्तिको सम्बन्ध खुट्याउन उनी त्यसयता कुदिरहेकै छन् । हाल उनी ४० वर्षे राजनीतिज्ञ र पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका छन् । धनकुटा क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेका हेमराज भण्डारीले राज्य र राज्यका संयन्त्रलाई कसरी बुझे ? नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी
निर्णायक कर्मचारीतन्त्र हुँदोरहेछ । कर्मचारीलाई समाएर काम गराउँदा नेताले भनेको भन्दा छिटो हुने अनुभव गरियो । हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई गहिराइमा गएर बुझेकै रहेनछौँ भन्ने महसुस भयो । त्यसपछिको काम भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र होइन कि राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभिन्न तत्व, अवयव र संयन्त्रका बारेमा खोज्ने, अध्ययन गर्ने र अनुभवी निवर्तमान र वर्तमान कर्मचारी, राजनीतिज्ञहरुसँग छलफल गर्न थालियो । राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई नजिकबाट केलाउँदै जाँदा राज्यको कानुन निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको कार्यान्वयनबारे बुझ्दै जाँदा मेरा लागि संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकाल विश्वविद्यालयको जटिल र महत्वपूर्ण कोर्स पूरा गरेजस्तो भयो । राज्य संयन्त्र र नेपाल राज्यबारेमा मलाई त्यो विश्वविद्यालयले धेरै कुरा सिकाएको छ । बिरलै मान्छेहरुले त्यो कोर्स पूरा गर्ने अवसर पाउँछन् जस्तो लाग्छ ।
के लाग्थ्यो भने जनताका विभिन्न काम नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि हुन्छ । तर कुरा त्यति मात्र रहेनछ । नेतालाई भनेको कामको परिणाम आउन निकै ढिला हुने । किन यस्तो हुन्छ भनेर केलाउँदै जाँदा थाहा भयो उनीहरुले मात्र भनेर, चाहेर हुँदो रहेनछ ।
राजतन्त्र हुँदासम्म त्यो (नेपाली सेना) अलिकति भए पनि अक्षुण्ण थियो । तर राजतन्त्रको अन्त्यसँगै त्यहाँ रहेको अधिकार विभाजित हुन पुग्यो । राजनीतिक रुपमा राजासँग भएको अधिकार अहिले न त राष्ट्रपतिसँग छ, न प्रधानमन्त्रीसँग, न संसद, न क्याबिनेटसँग । राजाको अधिकार विकेन्द्रत भएसँगै त्यसको केही प्रतिशत अधिकार जसलाई म ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर भन्छु, त्यो लैनचौरले लग्यो ।
लोकमान, कसको एजेन्डा थियो ? कसको दबाबमा उनी अख्तियार प्रमुख भए ? खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष कसरी भए ? त्यो कसको एजेन्डा थियो ? लिलामणि पौडेललाई कसले मुख्य सचिव बनाउन रोकेको थियो ? हामीले यो भन्न डराउनु पर्दैन । जनतालाई यथार्थ के हो भन्नैपर्ने हुन्छ ।
यस सवालमा राजनीतिक पार्टीहरु चुकेका छन् । त्यसैकारण खासखास समयमा यस्तो अधिकारको प्रयोग भारतले गरेको हामीले पाउने गर्छौँ । जस्तै– लोकमान, कसको एजेन्डा थियो ? कसको दबाबमा उनी अख्तियार प्रमुख भए ? खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष कसरी भए ? त्यो कसको एजेन्डा थियो ? लिलामणि पौडेललाई कसले मुख्य सचिव बनाउन रोकेको थियो ? हामीले यो भन्न डराउनु पर्दैन । जनतालाई यथार्थ के हो भन्नैपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो पुस्ताका लागि यो धेरै ठूलो पाठ हो । यसलाई गहिरो गरी अध्ययन नगरिकन यसबाट भावि दिनहरुमा शिक्षा नलिइकन हामीले भारतको हस्तक्षेप र प्रभावलाई कम गर्दै हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई बलियो पार्न सक्दैनौँ ।
राजनीतिज्ञ, मिडिया र विश्लेषकहरुले आशावादी कुरा गर्नुको सट्टा निराशावादी नकारात्मक कुरालाई बढी प्रश्रय दिएको हुनाले यस्तो भएको भन्ठान्छु । सकारात्मकलाई सकारात्मक भनेर भन्न सकिएन । हामीले र मिडियाले यो कुरा यति हो र यसका सीमा यति हुन् भन्नुपर्ने थियो । त्यो नहुँदा पनि निराशा बढेको हो । उता राजनीतिज्ञमा यही मौका जनताको पक्षमा काम गरौँभन्दा पनि यही मौका हो आफ्ना लागि गरौँ भन्ने भावना जबरजस्त भयो । राजनीतिज्ञमा चरम अवसरवाद हावी भयो । देश, जनता, कर्तव्य, संस्कार सबै भुल्नु भनेको गम्भीर विचलन हो ।
हाम्रो राजनीतिमा विचलन आएकै हो । तपाईंले हेर्नुभयो भने पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति कुनै आकर्षण छैन । यो अवसरवादले निम्त्याएको परिणाम हो । मैले यो निराशालाई रोक्न सकारात्मक सन्देश दिने केही सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्ने देखेको छु । सचेत प्रयासबाट केही काम गरेर अहिलेको परिवर्तनलाई जोगाउन सकेनौँ भने यहीँबाट नकारात्मक परिवर्तनतर्फ देश जान्छ । त्यो भनेको यस भद्रगोललाई रोक्न भनेर आउने डिक्टेटरसिप हो । अहिलेको निराशालाई चिर्ने अर्को सकारात्मक कदम भनेको चुनाव नै हो । त्यहाँबाट आशालाग्दा अनुहार राजनीतिमा आउन सक्छन् । – रातोपाटीबाट साभार